Ịzụta gị egwú ngwaahịa n'ụzọ dị mfe site na-esonụ music ngwá ụlọ ahịa Online
Music a dịgasị ubi nke nkà na ọtụtụ ndị na-agbalị itinye a na ubi. Ọ bụghị nanị n'ihi na ha na-enyere na-atụrụ ndụ ndị ọzọ uche na mkpụrụ obi, ma ọ na-enyekwara ha aka ịghọ ewu ewu na-eru ka a ibu ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ. Ndị na-adịghị nwere mesmerizing olu nwekwara ike tinye a na ubi site n'ịghọ a onyeegwu ke ha troupe. A ezi troupe ga-ezu naanị na ọnụnọ nke a mma musician na ya. Ma na-enwe ezi ngwá egwú dị nnọọ amanyere bụ iwu welie ọ bụla ọrụ. Ya mere dị otú ahụ egwú ga-ahụ na-echekwa nke na-enye ha otu ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ a yiri ngwaahịa dị ka ndị na-eji ụfọdụ ama n'ụwa nile egwuregwu.
1. Top 10 online echekwa ịzụta ngwá
2. Top 3 online echekwa maka abụọ n'aka ngwá
Top 10 online echekwa ịzụta ngwá
Ndị na-esonụ bụ ndepụta nke n'elu 10 online echekwa site na nke ndị mmadụ nwere ike ịzụta dị iche iche akwara.
www.guitarstreet.in: Nke a bụ nnọọ ewu ewu ụlọ ahịa na ebe ndị mmadụ ga-ahụ a dịgasị iche iche nke a ole na ole ngwá egwú-abụ dị n'okpuru ha ọkọlọtọ. A na-agụnye guitar, rụọ, keyboards, harmonica, melodica, violin nakwa accordians. Ndị a niile na ngwaahịa na-nkewa n'okpuru iche iche na ngalaba nke a esenowo ka mfe ịnyagharịa ha akpan akpan ubi nke ngwaahịa. Ozugbo nleta a ngalaba, ha nwere otu nhọrọ nke ibelata ala ngwaahịa dabere na ha chọrọ. Ha na-mara ha dịgasị iche iche nke ngwá akwado ma novice na ọrụ egwuregwu. Ọbịa nwere ike ịkwụ ụgwọ site dị iche iche ase, na karị mara ugwo usoro nke kpọmkwem depositing ha na akaụntụ. Otu letdown ezie bụ na saịtị a bụ kwesịrị ekwesị na ndị bi na India.
www.musiciansfriend.com: Nke a na-adị mfe kwubara na n'elu 5 ndepụta nke fọrọ nke nta ọ bụla nyochaa peeji ruru ya dịgasị iche iche nke ngwaahịa iche si ọtụtụ uru na ndị mmadụ na-enweta site na ya. Saịtị a nwere a dịgasị iche iche nke egwú na ngwaahịa, nke na-nkewa na ụdị ngwá na ha na-abịa n'okpuru. Otu nnukwu uru bụ na ndị mmadụ na ọ bụghị nanị na chọta ngwá, kamakwa egwú ndị ọzọ equipments dị ka amplifiers, okwu, mike emegharị ihe dị iche iche ngwá, music Ibé akwụkwọ na kwa guzo jide ha, iche site ọzọ otú ahụ na atụmatụ. Saịtị na-enyekwa ego maka ha na ngwaahịa, na ọbụna na-enye free mba mbupu mgbe ndị mmadụ na-azụ karịrị otu price. Otu drawback bụ na ndị mmadụ ga-ahụ isi categorization ebe na-a bit congested nke ga-eri a bit nke ha oge iji chọta a ngwaahịa nke ha oke.
www.furtadosonline.com: E nwere ihe ọzọ Indian na saịtị ka jisiri chọta a ebe a na ndepụta, n'ihi na nke dị mfe okirikiri nhọrọ ukwuu na dịgasị iche iche nke ngwaahịa na ọ nwere na ya na saịtị. Ọ na-eme na-achọ mfe maka ihe ọ bụla onye na-ẹyak saịtị dị ka ọ na-enyere ha aka ịchọta a ngwaahịa site 3 ụzọ dị iche iche. Ha nwekwara niile omenala nakwa ndị ọhụrụ equipments na dị n'ahịa. Ha na-enyekwa a free nnyefe n'ihi ahịa ha mgbe ha na-azụ karịrị a ụfọdụ ego. Ọnọdụ ha na ahịa ga-ebubo ma ọ bụrụ na ha na-ahọrọ maka a dị iche iche mbupu usoro ma ọ bụ a na-akwụ ụgwọ nnyefe n'ihi pianos bụ ihe na-eme ka ndị ahịa ịhụ ka a con na ihe ma ọ bụghị oru oma website.
www.amazon.com A nnọọ ewu ewu online ụlọ ahịa na ebe ndị mmadụ nwere ike ịzụta iche iche iche iche nke ngwaahịa, saịtị a na-enyekwara ndị mmadụ chọta a dịgasị iche iche nke egwú ngwaahịa na ha nwere ike iche nke. Ọ nwere dịgasị iche iche nke collections ma na-enye ha ngwa ngwa nke ndị a n'ihu ha nwere ike ọbụna na-eche nke. Mgbe ọ nwere ọtụtụ ndị dị otú ahụ positives, saịtị nwere nani mpaghara centric ngwá ukwuu n'ime. Ọ bụrụ na ndị mmadụ chọrọ ịzụta a ngwaahịa na ha na ọnọdụ ha, ha ga-azụ ha site n'otu ụlọ ọrụ ma na a dị iche iche mpaghara ebe ha ga-abụ dị. Nke a pụtara na ha ga-enweta ngwaahịa nanị mgbe ụbọchị ụfọdụ na kwa ha ga-akwụ ụgwọ ndị a na ngwaahịa maka mba mbupu.
www.music123.com: Nke a bụ nnọọ mma na saịtị na ndepụta a nke ọ bụghị nanị nwere obosara nso nke ngwaahịa, ma na-enyekwa ndị na ọtụtụ ụlọ ọrụ maka abamuru nke ndị mmadụ. Otu n'ime ndị isi uru bụ na ha nwere dum collection nkewa n'okpuru dị iche iche ibiere. Ebe ọ bụ na ọ na-agba ọsọ site a ezinụlọ, ha na-agba ume budding artists site na-enwe yiri equipments ọbụna maka ha bụ ọgbọ. Ndị mmadụ pụrụ ịhụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ nke ime ka ọ a ụwa ma ama online ụlọ ahịa n'ihi na ndị mmadụ gafee ụwa n'ihi na ha egwú mkpa na a ego price. Mgbe ụlọ ọrụ ndị ọzọ hụ na ha na-enye global mbupu maka a obere price ma ọ bụ ọbụna n'ihi na free na a ụgwọ n'elu a akpan akpan price, ha adịghị ihe ọ bụla na-enye free ma ọ bụ ọbụna belata n'usoro mbupu maka mba deliveries.
www.musiciansbuy. com: Ọ bụrụ na ọ bụ ego akụkụ na egbochiwo si na-eme gị zuo nke a àgwà ngwá egwú, ndị mmadụ nwere ike isi ozugbo na a online ụlọ ahịa. Nke a online ụlọ ahịa na-etu ọnụ a dịgasị iche iche nke ngwaahịa maka ndị ịzụta n'ọnụ ego dị. The setback ezie bụ na ndị mmadụ nwere ike ịhụ ha ọrụ naanị na United States na ọ bụghị n'ebe ọ bụla ọzọ.
www.musicalinstrumenthaven.com: ezie na e nwere ọtụtụ saịtị site na nke ndị mmadụ nwere ike ịzụta ha na ngwaahịa, saịtị a ana achi achi na ndị mmadụ na-esi na ha chọrọ ngwaahịa mfe. Nke a na saịtị na-enye niile ji n'akụkụ dị iche iche nke ụwa na-anapụta ha ka ha dị iche iche ahịa ndị na-emi odude ke n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Otu drawback bụ na ọ bụrụ ndị denye aha na ha Akwụkwọ Akụkọ metụtara a akpan akpan ngwá, ha na-ezite ya mgbe nile n'ihi na fọrọ nke nta niile ha na ngwaahịa nke nwere ike na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ. Ma, ndị mmadụ pụrụ nanị pụọ na ha na ndenye aha n'oge ọ bụla mfe.
www.zzounds.com: Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-achọ ịzụta ụfọdụ ọtụtụ dị ngwá egwú nke dị maka ha, ha nwere ike dị ka nke ọma gaa na nke a na saịtị. Ma ha ga na-chọta ohere ka nkịtị ngwá, nke nwere ike ịbụ a drawback ndị chọrọ ịzụta a pụrụ iche na-obere ngwá.
www.jacksmusicstore.com: Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-achọ ihe dị irè na saịtị nke enyere ha aka mezue ha azụmahịa na a jiffy, mgbe ahụ, a ga-eleghị-kasị mma na saịtị maka ha. Nke a nwere a dịgasị iche iche nke ngwaahịa maka uru nke ndị ezie na saịtị nwere ike anya cluttered eme ka o siere ndị mmadụ ịnyagharịa mfe.
www.wichitaband.com: The dịkarịa ala họọrọ saịtị ga-eleghị anya saịtị a. The navigation na saịtị a bụ n'ezie siri ike na-eme ka ọ dị ka isi ihe mere ndị mmadụ na-nwere ya dị ka ha ikpeazụ mmasị. Ma ha ka elu maka nke a site n'inye ahaziri ngwaahịa maka ndị ahịa ha dabere na ha chọrọ na a nnọọ obere na-adịru nke oge na na a ezi uche price.
Top 3 online echekwa maka abụọ n'aka ngwá
Niile n'elu usoro inyere ndị mmadụ aka na ịzụ ngwaahịa nke bụ ohuru. Ma, e nwere ndị ga-enwe ike imeli otú ahụ a nnukwu ego maka a ọhụrụ mpempe ngwá na ga-adị njikere iji dozie ala na a abụọ n'aka ngwaahịa. Ndị na-esonụ 3 weebụsaịtị inyere ha aka inweta otú ahụ na ngwaahịa mfe.
www.hobgoblin.com: Nke a bụ ihe kasị họọrọ saịtị maka ndị na-achọ ka ndị dị otú ahụ ịzụta abụọ n'aka akwara. Isi uru bụ na ha nwere ike ịhụ ha na a nnọọ ọnụ ala price na free Obodo mbupu maka ngwaahịa zụrụ n'elu a akpan akpan ego. Ma saịtị nwere nnukwu mbupu ụgwọ n'ihi na ọnụ ala ngwaahịa.
www.andertons.co.uk: Nke a bụ ihe ọzọ na saịtị nke na-enye dịgasị iche iche nke collections na dị iche iche ahịa. Ndị mmadụ nwere ohere nkịtị ngwaahịa maka ha mgbe nile were, nakwa dị ka Devid agụghị ndị gbara ngwaahịa inyere ndị mmadụ aka ka ha ngosi. Kama ọ bụ naanị ndị si UK ga-enwe ike ịzụta site na saịtị.
www.ebay.com: A ụwa ugbu saịtị, ndị mmadụ nwere ike ịhụ iche iche iche iche nke ngwaahịa ndị dị na saịtị a na-enyekwa global Mbupu. Ma Ohere ka ndị mmadụ chọta a ngwaahịa nke ha nhọrọ na-nta tụnyere ndị ọzọ na abụọ na ngwaahịa.
> Resource> Music> Buy Musical Ngwaahịa n'ụzọ dị mfe site Music Instrument Store Online